/Blog/Ithala/2019 Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6
ezaposwa ngomhla 05 / 07 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Yintoni ei-estosterone enanthate
Isinyathelo esilandelayo omele uyenze ukukwenza isisombululo kwisirinji oya kusebenzisa ukuyifakraza. Ungasebenzisa enye i-syringe enkulu okanye encinci kwaye ukhethe ukuphinda inkqubo ngokuphindaphindiweyo.
Kodwa ke, kufuneka uqaphele ukuba ixesha elithatyathwe ukucoca isisombululo lixhomekeke kwi-steroid kunye nemig / ml yemveliso.
Xa usuyenziwe ukucoca kwi-vial oyinyumba, inkqubo iphelele.
Indlela yokukhetha i-Steroids i-Powder Suppliers kwi-12 Steps Indlela yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe yokudibanisa i-Trenbolone Inanthate Powder 2019